China Mpanamboatra insulator fampiatoana polymer fampiatoana avo lenta | Histe
Ny endri-javatra sy ny tombony azo avy amin'ny vokatra
1.Ny booster vita amin'ny silika dia malefaka sy matevina
2.Fampisehoana tsara hydrophobic, fanoherana tsara ny fahanterana, ny fanarahana ary ny fikaohon-tany.
Ny tsoroka FRP mahery 3.hatra mahery dia miantoka ny fahamendrehan'ny insulator mitambatra.
4.Ny peratra corona dia manaparitaka tsara ny sahan'aratra mandritra ny famaky ny insulator mba hisorohana ny fisehoan'ny corona ary hiarovana ny insulator amin'ny fahasimbana mavesatra amin'ny faran'ny farany raha misy flashover.
5.Ny famaranana farany sy ny tsorakazo FRP dia mifandraika amin'ny fitaovam-pandrefesana farany azo antoka, manome antoka ny fahombiazan'ny vokatra.
6.Ny endri-tsoratra famehezana farany tsy manam-paharoa dia manatsara ny fahamendrehana famehezana ny vokatra.
7.Ny fepetra fitsapana henjana dia miantoka ny kalitao tonga lafatra amin'ny vokatra rehetra.
8.We dia afaka mamolavola sy mamokatra mifanaraka amin'ny sary sy ny takiana antsipirian'ny mpanjifa.
Anaran'ny vokatra Product
Insulator hazo fijaliana mitambatra FSW-35/100 35 100 650 450 1015 230 95
Previous: Fiarovana avo an'ny silikaoma vita amin'ny volo vita amin'ny paompy
Manaraka: Fanodina mitoka-monina avo lenta avo lenta
Fiarovana avo vita amin'ny silika vita amin'ny kodiarana ...
TOSIKARATRA TOSIKARATRA elektrika avo lenta Pin Insu ...